Duesseldorf mankany Larnaca izao ao amin'ny Cobalt Air, Sipra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Duesseldorf mankany Larnaca izao ao amin'ny Cobalt Air, Sipra
Cobalt Air, kaompaniam-pandrosoana niitatra tao Sipra, nanokana serivisy mivantana indroa isan-kerinandro any Dusseldorf, renivohitr'i Rhine-Westphalia Avaratra hatrany Larnaca, androany 3 Mey, tanàna faharoa Alemanina taorian'ny Frankfurt.
Ny 09:05 maraina voalohany ny fiaingan'ny Airbus A320 avy tany Larnaca dia nilatsaka ara-potoana tamin'ny 12 ora sy sasany ora maraina teny an-toerana androany maraina.
Ny serivisy vaovao, miasa amin'ny Airbus A320, miaraka amin'ny seha-toekarena rehetra, dia miasa amin'ny Alakamisy sy Sabotsy. Ny fiaingan'ny sabotsy dia 07:05 ora, tonga any Dusseldorf amin'ny 10:30 ora.
Ny sidina Dusseldorf mankany Larnaca dia miala 13: 20hrs, tonga 18: 20hr amin'ny Alakamisy, raha ny sabotsy kosa dia amin'ny 11: 20ora, tonga any Larnaca amin'ny 16: 20hrs. Ny fitarihana ankehitriny amin'ny saran-dàlana amin'ny fiverenan'ny £ 160.
Ireo mpandeha avy any Sipra izay mandeha amin'ny asa aman-draharaha sy fialam-boly dia hahita be dia be hita sy hatao any Dusseldorf, tanàna fahafito lehibe indrindra any Alemana, izay vavahady mahatalanjona mankany Alemana midadasika kokoa ihany koa. Fiaran-dalamby 350 mahery, manomboka amin'ny S-Bahns (lamasinina an-tanàn-dehibe) ka hatrany amin'ny lamasinina ICEs Intercity Express) mijanona ao amin'ny garan-dalamby Airport Düsseldorf isan'andro.
Iza ireo Chef tanora amin'ny taona?
Casinos renirano, Resorts ary filokana: Fiaraha-miasa tena manan-tantara…